marchand de rus | GAZETY_ADALADALA
ANTSO AVO ho an’ny mpiandraikitra ny Commune Urbaine Antananarivo
Vao avy any Antsirabe aho no manoratra ity lahatsoratra ity. Lahatsoratra soratako manokana hiantsoako ny mpiandraikitra ny Commune Urbaine Antananarivo Renivohitra.
Nandritry ny andro vitsy nipetrahako tao an-drenivohitr’i Vakinankaratra dia tena faly sy ravo ery ny saina nahita fa milamina sy madio ny tanàna. Tena mendrika e! Tsy hitako izay ilazana ny zaridaina eo anelanelan’i Tobin’ny fiaran-dalamby sy ny Hotel des Thermes.
Vantany vao niditra an’Antananarivo anefa dia ny fako no tsikaritra. Ny teny Behoririka no tena tsinjoko (sy fahitako isaky ny alina rehefa mody avy miasa). Tavela eny (na iniana avela mihitsy) ireo fatim-baoritra sy loto isan-karazany aorian’ny fotoana ialan’ireo mpivarotra amoron-dalana (marchands de rue) amin’ny toerana nobahanany. Amin’ny antoandro anefa ry zalahy lasa tompon’ny 1/3 ny arabe. Sahirana mihitsy ny tena mitady làlana hodiavina, ary raha sendra mba mandefa fanairana ianao, dia na ompa no azo, na dia ny masony no mivontirika mila hitelina anao manta.
Koa antso avo no mba sendra tonga ato antsaiko alefa hiantefa aminareo tomponandraikitra. Toy izao izany:
Mangataka anareo aho ny tsy hanadio ny tanàna (eny fa na dia iray na roa andro monja aza). Indrindra fa amin’izao fotoanan’ny orana izao.
Hazavaiko ny antony:
Mba mampalahelo ahy ihany ny mahita ireo mpiasan’ny Kaominina isaky ny alina manàla ny loto sy fako (eny fa hatramin’ny dikin-dry zalahy mpivarotra ireo, izay ataony anaty sachet aza indraindray). Aman-taoniny maro isaky ny alina no diovina amin’izany. Rehefa maraina ny andro, dia indreny indray ireo mpivarotra maty eritreritra rehetra fa tonga mibàhana ny toerana sy ‘manalika’ ny rehetra (tsy an-kanavaka io an, na mpandeha an-tongotra, na mpampiasa arabe, na ny mpiasanareo ao amin’ny Kaominina). Mety hisy amin’ny mpamaky izao no hanatsiny ahy hoe dia ahoana ny aretina sy ny fofona aterak’izany? Saingy raha indray andro sy indray alina no mety hahitantsika fahadiovana sy filaminana mandavan-taona, tsy ho aritra ve sanatria? Didy maso asiam-panafody io ka asakasa-tsika rehetra ihany.
Rehefa esorina teo anefa ry zalahy ireo dia inona no avaliny:
Aiza no mba hiveloman’ny madinika e? Dia madinika ihany no atao tsinontsinona e! Ny madinika ihany no oia sy oia e! sns…Tonga hatramin’ny filazana fa ianareo mpanao politika ihany no nametraka anay teto e!!!
Ka ny tiako hahatongavana dia ny hoe: raha tsy manadio tanàna ianareo (na dia indray andro sy indray alina monja aza), dia tiako ho hita kosa raha hahavita hamelatra entana eo ambonin’ny fako navelany ny omalin’iny ireo mpivarotra ireo. Tena mampivonto fo mantsy ny loto tavela sy hitan’ny maso, ary lalovan’ny fiara rehetra amin’io faritra lazaiko manokana io rehefa hariva ny andro.
koa averiko ny antso avo avy amiko:
AZA DIOVINA ALOHA NY TANANA, NA DIA HO IRAY ANDRO SY IRAY ALINA MONJA AZA
Farany, marina fa tsy mbola voahaja ny fanasokajiana ny fako misoratra eto amin’ny varavaran’ity fanariana fako ao Antsirabe ity,
saingy kosa mba hita fa tafiditra tsara ao anatiny ao daholo ihany ny loto. Tsy manimba ny endriky ny tanàna? Sa izaho no sendra ny andro tsara sy madio fony aho tany? Mba hanao ahoana re raha aty Antananarivo no misy toy ity e? Asio aloha hihomehezana e! Raha tsy hoe ho lasa tranon’ny 4’mi angaha. Olona nahita fianarana daholo mantsy no betsaka eto Antananarivo Renivohitra eto, ka tsy ho hita eo ve. Ny taolam-pary avy notsakoin’ny ngetroka aza mbola atsipiny avy any anaty fiara miaraka amin’ny sachet keliny ho eny afovoan’ny làlana lalovany. Mahamenatra an!
Filed under: anao ny fitenenana, fahasalamana, fiaraha-monina, tapatapany, toetr'andro | Tagged: amoron-dalana, Antsirabe, commune Urbaine Antananarivo, loto, marchand de rus, mpivarotra |	2 Comments »